सीरियामा युद्ध र आगामी वा 'मित्रता' विश्व युद्ध: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भनिन्छ आतंकवादको विरुद्धमा एक वैश्विक सुरक्षा संगठन स्थापित गर्न। प्रश्न यो हो कि हामी यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं कि पुतिन (वा पुर्णन, यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ) वास्तवमा नयाँ विश्व अर्डरको विश्वव्यापी एजेन्डालाई समर्थन गर्दछ। त्यस प्रश्नको जवाफ दिन, यो सायद रूसको इतिहास थाहा पाउन उपयोगी हुन सक्छ र आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रकाशमा राख्न सकिन्छ। धेरै व्यक्तिहरूले सोच्छन् कि पुतिन एल्टिटिस्ट विश्ववादीवादको फरमा गाह्रो हुन्छ र उनीहरूले उनीहरूलाई दाँत र कील बनाउँछन्। यो कारण हुनेछ कि रूस सबै पक्षबाट यति धम्की दिइन्छ र यो रूस तिर न्युटोको आन्तरिक रुखको कारण हुनेछ। र त्यहाँ धेरै कुरा छ, उदाहरणका लागि हामीले ब्राजिलमा के गरिरहेको जस्तो देखिन्छौं। राष्ट्रपति Dilma Rousseff एक पीडा जस्तो देखिन्छ अमेरिकी घुसपैठ संसद र सीनेटरहरुलाई जो अब मा रिश्वत गरिएको छ अब शीर्षक संग एक घोटाला मा समाप्त हुन्छ 'सञ्चालन कार वाश'। ब्राजिल ब्राजिल देशहरूमध्ये एक हो र यसकारण स्पष्ट रूपमा रूससँग सम्बन्धित। त्यस सम्बन्ध यो केहि हद सम्म कमजोर छ। यसबाहेक, दिलमा रसस्फमा "कूप" उल्टिएको जस्तो देखिन्छ किनभने किनभने सीनेटमा पहिलेको मतदान गरिएको थियो द्वारा अस्वीकार गरिएको छ। नयाँ अध्यक्ष बिरुवा घर।
यसैले यो देखिन्छ कि साँच्चिकै एक उच्च स्तर मा संघर्ष छ कि रूस संग सम्बन्धित देशहरु लाई तोडफोड गर्न को लागी। यसैले यो तर्कसंगत हुनेछ कि अन्ततः नयाँ विश्व अर्डर को योजनाहरु लाई निराश बनाउन एक संघर्ष हो। यो केही छैन कि यो धेरै ट्युमर र धम्कीको साथमा रहेको छ, र राम्रो कारणले गर्दा अमेरिकाले देशहरुमा सरकारहरुलाई पराजित गर्न सक्दो छ। अथवा यो सिर्फ शताब्दी-विभाजनको पुरानो खेल हो र जित्छ कि समाजको सबै स्तरहरूमा पहिचान गर्न सकिन्छ? अमेरिकामा पनि हामी चुनावको प्रारम्भिक समयमा देख्न सक्छौं कि डोनाल्ड ट्रम्पले कसरी झाडी हिलाउँछ। यो तीव्र रूपमा सबै फन्टहरूमा छ।
सीरियामा युद्ध विश्वव्यापी रडारको काममा रडारमा मात्र छ र विश्वको वर्चस्व तिरको सडक नक्शा हो। यो केवल सिरियामा युद्ध होइन, तर यो सबैभन्दा पराजित युद्ध हो, किनभने मीडिया एक विशेष प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि हामी मुश्किलले मालीको युद्धबाट केही कुरा सुन्न सक्छौं। यी युद्धहरूले गर्दा शरणार्थी प्रवाहहरू निश्चित उद्देश्यको सेवा गर्छन्, तर एकअर्का विरुद्ध आदिवासीहरूको स्थापना पनि विभाजित र विजयको एजेन्डा कार्य गर्दछ। यो रणनीति पहिले नै सफलतापूर्वक धेरै पटक प्रयोग गरिएको छ। यसको सबैभन्दा हालको उदाहरण यूगोस्लाभियन युद्ध हो। तलका वृत्तचित्रले धेरै तेज विश्लेषण दिन्छ।
सिरियामा युद्ध अवस्थाको राम्रो चित्र प्राप्त गर्न वा "ग्लोबल युद्धको अवस्था" - यो केवल एक सानो इतिहास जान्न को लागि उपयोगी छैन, तर यो पनि माथि र सबै भन्दा माथि 'सामान्य अर्थ' सुन्न सिक्न वा किसानको बुद्धि वा विभेद। यसो गर्दा, यो मुख्य रूप देखि प्रचार को माध्यम ले प्रहार र मुख्यधारा मीडिया को विकृत छवि को कला को रूप मा छ।
म व्याख्या गर्नेछु, कदम द्वारा कदम, के मा सोच्न को लागी उपयोगी छ र म आशा गर्दछ कि म सबै केहि सही र सही ढंग देखि व्याकरण गर्न मा सक्षम हूँ, किनकि म एक इतिहासकार छैन तर म खुदाई को माध्यम ले जानकारी एकत्रित गरेर रहयो हूँ। आधिकारिक इतिहास अक्सर विजेताहरु द्वारा पुनः प्रकाशित गरिन्छ, यो परिभाषा द्वारा सही संस्करण को खोज गर्न गाह्रो बनाउन।
सिरियामा युद्ध मार्च 2011 सुरु भयो। यो एक व्यक्ति को एक कार्य को रूप मा 'अरब स्प्रिंग' को परिणाम हुनेछ: टुनिशिया मा एक स्ट्रीट विक्रेता अटक आफैलाई आगो लगाउँछु सबै प्रकारको दुर्व्यवहारको विरोधमा: गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दमन। यो ट्युनिसियामा प्रदर्शनको सुरुवात भयो, जुन क्षेत्रको अन्य देशहरूमा फैलिएको थियो, जसको उद्देश्य उद्देश्यले उदारवादी नेतालाई उजागर गर्न को लागी यी दुर्व्यवहारको दोषीको रूपमा देखा पर्यो। टुनिशिया मिस्र आएपछि यमन, लिबिया र मार्चको मध्यतिर पनि सिरिया। त्यो कम्तिमा आधिकारिक व्याख्यान हो। यस सन्दर्भमा, यो अझ बढी सिक्न उपयोगी छ कि कसरि क्रांतिलाई निर्माण गर्ने तरिकामा सीआईए काम जस्तै गोपनीय सेवाहरू। यूक्रेन यो को एक राम्रो उदाहरण हो, तर वास्तव मा यो युगोस्लाव मा '90' वर्ष मा शुरू गर्यो। र शायद चाल रोमको बाटो जस्तो पुरानो हो।
म्याट्रिक्स र martinvrijland.nl को बाहिर मा तपाईं अनुकूलक को क्रांति प्रबंधक को बारे मा केहि लेख मिल जाएगा। यो विधि जसको यी विद्रोहीहरू विभिन्न देशहरूमा बनाइन्छ जसलाई जीन तीव्र तरिका भनिन्छ। संयोग, यो विधि अब युरोपको अशांतिको निर्माणको लागि प्रयोग गरिने धेरै सम्भावना हो Pegida र एन्टिफा आंदोलनहरू। यो विधि कसरी काम गर्छ देखाउँछ कि राम्रो फिलिम कम से कम यो क्रान्तिको अधिकारी मिश्र मा विद्रोह कसरी orchestrated हेर्न3:. 18 देखि, तल भिडियो छ। यूक्रेनमा पनि, यो विधि सफलतापूर्वक लागू गर्न को लागी एक कुप्प बनाउन थालेको थियो। कुप्प सफल भए पनि पनि मैले यो भविष्यवाणी गरेकिनभने मैले जीन तीव्र पद्धति पहिचान गरेँ।
लागू गर्ने विधिहरू र प्रचार उपकरणहरूको शस्त्रागार जो कि शासन गर्न चाहनेहरूको लागि उपलब्ध छन् अनगिनत छन्। उदाहरणका लागि, उनीहरूले 'झूटो ध्वज' हमलाहरू, पूरा परिस्थितिहरू (होहाक्सको रूपमा पनि चिनिन्छ) वा 'भित्रको काम' सँग काम गर्न सक्दछ, जसमा ग्ल्याडिया-जस्तो एजेन्टहरू आफ्नै व्यक्तिहरूमाथि आक्रमण गर्छन् र अर्को समूहमा आक्रमणलाई दोष लगाउँछन्। राख्नुहोस् (जसको साथ, यो त्यो थियो, त्यस देश वा समूहको झण्डा त्यस आक्रमणमा राख्न सकिन्छ र यो एक 'झूटो ध्वज' आक्रमण हो जुन भित्र भित्र प्रतिबद्ध गरिएको छ - काम भित्र भित्र)। म पछि थप विवरणमा फर्किनेछु।
म सिरियामा युद्धको उत्पत्तिको बारेमा धेरै जान्न चाहँदैनन्, किनभने सबैले त्यस पछ्याउन सकेका छन्, तर के कुरा स्पष्ट छ कि इतिहासले देखाएको छ कि शासनको साथ सधैंको लागि आलोचनाहरू छन्। खराब र खराब राख्नुहोस्। सद्दाम हुसैनको 'सामूहिक विनाशको हतियार' हुनेछ, तर तिनीहरू कहिल्यै फेला परेनन्। उदाहरणका लागि टोनी ब्लेयर, पछि ब्रिटिश संसदको लागि माफी माग्ने थियो (हेर्नुहोस् यहाँ)। नेदरल्यान्ड्समा, म विश्वास गर्दछु कि म यो असाध्यै घमन्ड थिएन, तर सम्भवतः डचहरूले क्यान्सरहरू सजिलो गर्न सक्दछन् (वा मैले भर्खरै छुट्याएको छु)। यसबाहेक, पश्चिम पहिले नै इराकमा घुम्न थाल्यो र सद्दाम हुसेन सिरिया भएको थियो। स्पष्ट थियो सद्दाम Hussein जस्तो देखिने यस्तो उत्तरी इराक मा Halabja को शहर मा कुर्द मा आक्रमण रूपमा भयानक कुराहरू, भएको, तर प्रश्न यो वास्तवमा Hussein थियो, rauwig त माथि हुँदा त्यहाँ पश्चिम कि हुँदा पूर्व प्रधानमन्त्री को patsy यूएसका विदेशी कामहरू, हेनरी चुसिङर, जसले ईरानलाई कपलाई सानो बनाउन थालेको थियो। तर जब सद्दाम क्षेत्र खाली गर्न थाल्नुभयो, त्यो थोडा झूट संग सफा गरिएको थियो। 2003 मा, इराक ले इराक को कारण संग कि Saddam हुसैन आतंकवाद को समर्थन गर्नेछन्। यस बीच यो स्पष्ट हुन सक्छ कि इराक वर्तमान स्थिति र सिरिया को आसपास एक आवश्यक क्षेत्र थियो।
सिरियामा युद्धको सुरुवात, सिरिया आक्रमण गर्नका लागि सबै प्रकारका परिस्थितिहरू पनि तयार भए। एक वास्तविक कारण अझै पनि त्यहाँ छैन, किनभने प्रत्येक बनाइएको अपमानजनक पहिल्यै बेपत्ता भएको छ। सीरिया, उदाहरणका लागि, माईन ग्याँस पनि थियो, तर चाँडै सफा गरियो। इजरायल पनि वेबसाइट Shoebat अगस्ट 2013 ले यो विद्रोही थियो जुन जहरीली गैस को इस्तेमाल गरे र अरामद शासन नहीं। अन्ततः, पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिले सिरियामा युद्ध गतिविधि विकास गर्ने अर्को कारण पाएको थियो। अझै पनि, यो स्पष्ट छैन किन कि Assad किन त्यस्तो खराब नेता हुनेछ र किन त्यो क्षेत्र खाली गर्नुपर्छ।
उल्लेखनीय रूपमा, सिरिया आक्रमण गर्न सबै झूटा दासहरू पछि त्यस अवधिमा आईएसआईएसको वृद्धि पछि असफल भयो। त्यो यो अवांछित थिएन। 2014 को अवधि, मेरो दृश्यमा, मात्र न्यानो-अप चरण हो। यो उल्लेखनीय छ कि टर्कीका राष्ट्रपति रेजिप टिपी उर्दूको वृद्धि कसरी भयो भनेर आईएसईको वृद्धिको बारेमा यो अवधि थियो। 2014 मा दुवै। उजुरी 2014 मा राष्ट्रपति ओबामा को निर्वाचित भएको थियो र आईएसआईएस को जुनून को आसपास 2014 को गिरफ्तार गर्यो। त्यो उर्दूको चुनाव अवधिमा थप्नुहोस् र त्यहाँ एक जडान हुन लाग्दछ।
त्यसोभए, म टर्की वा उर्दूको बारेमा के भन्नुहुन्छ भन्ने बारे सावधान हुनुपर्दछ, किनकि मैले टर्की वा उर्दू भाषाको चाँडै उल्लेख गर्दछु, धेरै टर्कहरू आफ्नो पछाडीमा छन्। के यो एमआईटी (टर्की गोप्य सेवा) को एजेन्सी हुन् जसले यहाँ नीदरलैण्डमा भावनाहरु को संरक्षण गर्नु पर्छ वा त्यो मात्र राष्ट्रीयता टर्की हो जुन केवल 1 को लागी महत्वपूर्ण आवाज सुन्न चाहदैन, निश्चित रूप देखि प्रश्न हो।
मलाई विश्वास छ कि त्यहाँ उर्दूको उदय र आईएसआईडीको वृद्धिबीचको लिङ्क देखिन्छ। त्यो जडान अत्यन्तै बढि छ र यही कारण छ कि यो इतिहासमा पहिलो गोताकार उपयोगी छ।
टर्की र तुर्क साम्राज्यको इतिहास
स्पष्टताको लागि, यो पहिलो टर्कीको इतिहास हेर्न उपयोगी छ। सबैभन्दा पहिला, किनभने टर्की विश्व स्तरमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु र दोस्रो पटक विश्वकप क्षेत्रमा सम्बन्धहरू अनुवाद गर्न सक्षम हुन सक्दछ जुन आज हामी देख्छौं। रूससँग सम्बन्ध र, उदाहरणका लागि, जर्मनी पनि तपाईंलाई स्पष्ट हुनेछ।
ओटोमन साम्राज्यले यस क्षेत्रमा एक क्षेत्रमा कब्जा गरेको थियो जसले उत्तर अफ्रिका, मिश्र र सऊदी अरबका ठूला भागहरूलाई युक्रेनका इलाकाबाट विस्तार गर्यो। यद्यपि वर्तमान इजरायल साम्राज्यको अधीनमा परेको थियो। पहिले आइपुग्दा Google नक्सा लिनको लागी कहाँ सीरिया छ र कुन देशहरू घेरिएको छ। त्यो सम्भवतः धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा हुनेछ, तर यो अझै पनि तपाईंको रिटाइनमा राम्रोसँग छ: गुगल नक्शा.
तल नक्शा ओर्थोम साम्राज्यले यसको शीर्षमा देखाउँछ।
YouTube मा मैले तल फेला पारेको भिडियोले छोटो र संक्षिप्त अवलोकन दिन्छ जुन कुन साम्राज्य बढेको छ र अन्तिम 2000 वर्षहरूमा गायब भएको छ।
दृश्य, सम्पूर्ण सही छैन किनभने यो नक्सा र समय मात्र फेरि नयाँ धनी को उद्भव, तर तिनीहरूले शिखर मा थिए समय देखि धनी shrinking छैन। बाइजान्टिन साम्राज्य वास्तवमा 395 मा ख्रीष्टियन र पश्चिम ईस्ट रोमन साम्राज्यहरु पछि रोमन साम्राज्य को विभाजन को एक परिणाम थियो। पूर्वी रोमन साम्राज्य बेजान्टेन साम्राज्य बनेको थियो, जसले हड्कियो र हालको इस्तांबुलको कन्स्टान्टिनोपलबाट शासन गरिरहेको थियो। रूस पूर्व पूर्वी रोमन साम्राज्य संग एक ठूलो संलग्नता थियो (वा Byzantine साम्राज्य भनिन्छ) Constantinople मा Bosporus जित्न जुन मा रूसी जहाज पूरा 860 200 लागि, छ। यो एक YouTube प्रस्तुतीकरण रोमन साम्राज्य को ब्रेक-अप को इतिहास को एक राम्रो सिंहावलोकन र बज्जाइनियन साम्राज्य को महान प्रभाव र रूस संग सम्बन्ध। रेकर्डको लागि: आजको इस्तांबुलको कन्स्टान्टिनिनप्ले नाम ईस्ट रोमन साम्राज्य सम्राट Constantine को सम्राटबाट आउँछ। पूर्वतान्त्रिज शहरको। यसैले बज्जाइनिन साम्राज्य को नाम बाट व्युत्पन्न हुन्छ।
याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि ख्रीष्टको पछि 1054 रोमन साम्राज्यको चर्च रोम अन्तर्गत चर्चमा बिस्तारै थियो र कन्टैंटिनोपल भित्र चर्च। रोमन चर्च पोप (रोमको पैतृक / सर्वोच्च पुजारी) लाई लियो, ल्याटिनको रूपमा निर्देशनको भाषाको रूपमा। ईस्ट रोमनको चर्च वा बज्जाइनिन साम्राज्यले पातरीपारी (वा कन्स्टान्टिनेप्लोको उच्च पूजाहारी) लाई भुइँमा राख्यो र युनानीले निर्देशनको भाषाको रूपमा गरेका थिए। त्यहाँ तपाईं रूससँग सम्बन्ध पत्ता लगाउन शुरु गर्नुहुन्छ, किनकि यस समयमा पापापाठ कहाँ छ? दाँया रूसमा। मस्को सटीक हुन। बज्जाइनिन साम्राज्यसँग रूसको सहभागिता प्रारम्भ भयो र पानीको माध्यमबाट व्यापार गर्ने सबै कुरा थियो। ब्ल्याक सागर यस मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाईयो। तिनीहरूले यसलाई के थियो अझै ज्ञात छैन जो एक पदार्थ मार्फत आगो अन्य जहाजहरू सताउन सक्छ जो एक हतियार थियो, तर "ग्रीक किनभने Byzantine साम्राज्य, समुद्र (विशेष गरी भू-मध्य) मा यसबाहेक मालिकको थियो आगो 'उल्लेख गरिएको थियो। उनीहरूले राम्रो तरवारहरू र त्यस समयमा कसैलाई भन्दा राम्रो सुरक्षा पाएका थिए।
सबै मा, तपाईं अहिले केहि चौथाई घट्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हालका दशकहरूमा हामीले के देख्यौं? हामीले सर्बियामा युगोस्लाभिया युद्धको साथ शुरु गरेका छौं। त्यसपछि हामीले ग्रीसमा वित्तीय संकट पाएका थियौं र हालै 2014 मा एक युद्ध यूक्रेनमा सुरु भयो। त्यसमा कत्तिको हिसाब छ? ठीक छ, सर्बियाले रूसी रूढ़िवादी विश्वासको कारण रूससँग जोडिएको छ (वास्तवमा पूर्वी रोमन वा बाइजान्टीन विश्वास); कीव रसियाली साम्राज्यको मूल शहर हो र यूनान रूससँग सम्बन्धित छ किनभने पुरानो बाइजाइनिन विश्वासको कारण ग्रीक मुख्य भाषा थियो। सबै तीन देशहरू जसमा "समस्याहरू" उत्पन्न भएका छन् रूसमा धेरै निर्भर छन्। मस्को वास्तवमा रूसी रूढ़िवादी विश्वासको विकल्प स्थान बन्यो; वास्तवमा ग्रीक ओर्थोडक्स विश्वास वा पुरानो पूर्वी रोमन विश्वास भनेको हो। विश्वास रोममा शुरु भएको थियो तर रोमबाट विभाजित गर्न चाहन्थे, किनकि रोमले धेरै उपासना गरे। छोटो: सर्बिया, ग्रीस र युक्रेन रूससँग धेरै संलग्न थिए। के तपाईँ डटहरू 'जडान' सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ को बिट हेर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? Mooizo, त्यसपछि हामीसँग सुरु छ। तर त्यहाँ धेरै छ।
तुर्क साम्राज्यको अन्त र सऊदी अरबको उद्भव
बज्जाइनिन वा पूर्वी रोमन साम्राज्यको टुक्राले तुर्क साम्राज्यको उदय वा वरपर वरपरको वरिपरि उचाल्दछ। त्यो तुर्क साम्राज्य पहिलो विश्व युद्धको साथ अवस्थित छ। त्यो पहिलो विश्वयुद्ध निस्सन्देह धेरै चर्चा गरिएको छ, तर मैले धेरै कुरा सुनेको छु त्यसमा सियोनवादको भूमिका र सऊदी अरबको उद्भव पनि। सोही, म फिर्ता पश्चिमी रोमन साम्राज्य र पूर्वी रोमन साम्राज्य गर्न, यो हामी तपाईं कल्पना गर्नुपर्छ जो दुई पुराना साम्राज्य को पुनरुत्थान, हेर्दै हुनुहुन्छ देखापर्ने थियो देखि प्राप्त कि पूर्वी रोमन साम्राज्य को राजधानी कन्ट्टिटिनोपोलको पतन पछि मास्को फर्कियो। वास्तविकता मा रूसी रियायत बज्जाइनियन साम्राज्य (अथवा पूर्व पूर्वी रोमन साम्राज्य) को समय मा एक नै विश्वास को रूप मा अपनाए, किनकी यो व्यापार सम्बन्धहरु को लागि फायदेमंद थियो। पोप फ्रान्सेली र रूसी अभिनेता किरिल बीचको वार्तामा हालै के तपाईंलाई याद छ? यस भिडियोलाई हेर्नुस्:
तपाईंले देख्नुहुन्छ कि तिनीहरू 1: 13 माइनसमा समान सम्झौता हस्ताक्षर गर्न देखा पर्छन्। के यो केहि पुरानो दुई युवर्जहरु संग विलय गर्न सक्छ; पश्चिमी र पूर्वी रोमन साम्राज्य? खैर, यदि तपाई अब सोच्नुहुन्छ: "चर्चहरूमा जसरी पनि कुनै प्रभाव छैन। यो अधिक सरकार र सेना द्वारा निर्धारण गरिन्छ", तपाईं सहमत हुनुहुनेछ गलत हुनुहोस्.
त्यसैले हामी टर्की र रूस बीचको तनाव देखो, यो अब कि तुर्क वास्तवमा तुर्क साम्राज्य को शेष, रूस को शत्रु infact बुझ्ने गरिन्छ। सबै पछि, रुसीहरू बाइज्यान्टाइनका व्यापार साझेदार थिए र तिनीहरूले पनि आफ्नो विश्वास अपनाए। रूस वास्तवमा नयाँ पूर्वी रोमन वा नयाँ बज्जाइनिन साम्राज्य हो। मास्को वर्तमान पूर्वी रोमन साम्राज्य को रोम हो।
यो पनि एक शक्ति पारी पश्चिमी रोमन साम्राज्य भित्र देखा परेको छ कि जस्तो देखिन्छ - पहिलो लन्डन - र त्यसपछि वाशिंगटन डीसी गर्न तर सायद हामी रोम अझै पनि केवल वित्तीय केन्द्र लन्डन सारिएको छ शक्ति केन्द्र, छ भनेर भन्न सकिन्छ ( स्विट्जरल्याण्ड र यो निकै विस्तार थिए गर्नुपर्छ, यस सन्दर्भमा) र पश्चिमी रोमन साम्राज्य छ वाशिंगटन डीसी गर्न सैन्य ब्लक मा भूल छैन गरौं। कम से कम उस परिप्रेक्ष्य मा तपाईं यसलाई देख सकते हो। यो एक सानो छोटो छ, किनकि तपाईले इङ्गल्याण्ड, फ्रान्स र जर्मनी बीचको केही शक्ति संघर्ष गरेका छन्।
तर पूर्णतया सम्पूर्ण संसारको इतिहास संक्षेपको सुरुवात गर्नु अघि तुर्क साम्राज्यमा जुम गरौं। तुर्क साम्राज्य वास्तव मा पहिलो विश्व युद्ध मा केवल कम छ। तलका भिडियोहरू त्यस सन्दर्भमा हेर्नको लागि उपयोगी छ। मलाई आशा छ कि तपाईको अंग्रेजी एकदम राम्रो छ, त्यसैले तपाइँ हेर्न सक्नुहुन्छ (2 को बारेमा हेर्नुहोस्: 20 मिनेट।)
साउदी अरब को र "राज्य" फिर्ता ब्रिटिश आफ्नो समर्थन को लागि एक इनाम को रूपमा अरब प्रायद्वीप को पूर्वी भाग मा Balfour घोषणापत्र पछि बोर्ड पायो जो इब्न Saud, एक Wahhabi Emir को घूसखोरी गर्न लगाया जान सक्छ कि सारा तर्क । 1916 मा, अरब क्षेत्र ले प्रथम विश्वयुद्ध को समयमा ग्रेट ब्रिटेन र फ्रान्स संग Sykes-Picot सम्झौता सम्म उनको अस्तित्व प्राप्त गरे। यसले तुर्क साम्राज्यको अन्तलाई हटाउँदछ; टर्कीको साम्राज्यको रूपमा वास्तव मा प्रथम विश्वयुद्ध भन्दा पहिले भनिन्छ। अरब इलाकाहरूको साम्राज्य ओटोमन (तुर्क) को शासनको अधीनमा आउन चाहन्थे र वास्तवमा युनाइटेड किंग्डम र फ्रेन्ससँग सम्झौता गरे। बारीमा ओटामान्सहरू जर्मनीद्वारा समर्थित थिए र यसको विपरीत। रूपमा पश्चिमी क्षेत्र को Emir पश्चिमी अरब प्रायद्वीप मा (फिलिम मा Hussein बिन अली भने), प्यालेस्टाइनमा यहूदी समुदाय को लागि एक राष्ट्रको सिर्जनाको लागि इलाका को आरक्षण को को Zionist योजना मा acquiesce इन्कार छ, थियो इब्न सउद (पूर्वी अरब क्षेत्रबाट) पारगमन पश्चिमी क्षेत्र (हुसैन बिन अली को) कब्जा गर्न को लागी।
छोटो मा, पहिलो सबै अरब कुल बाहिर bonjouren गर्न तुर्क साम्राज्य भाडामा थिए र त्यसपछि अरब Emir इस्राएलका राज्य अघि प्यालेस्टाइनमा क्षेत्रमा आरक्षण को Zionist योजना समर्थित हरेक अन्य Emir समर्थन गर्न तयार भएको थियो (वहाँ जो कपडा सानो बनाउन सहमत छैन। त्यसोभयो थकित इब्न शादले प्रायद्वीप को पश्चिमी भागलाई विजय हासिल गरे र एक इनामको रूपमा उनीहरूलाई पछि देखि नै राजालाई बोलाउन अनुमति दिए। त्यसैले सऊदी शाही परिवारले यसको रस्सा d'tre पुरा तरिकाले यसको साथ सहयोग गर्न सकेन त्यसपछि पहिले नै ज्ञात योजना इजरायली राज्यको स्थापनाको। वा यति: सऊदी अरबको शाही घरले सियोनवादको अस्तित्वलाई धन्यवाद! यो सम्झनुहोस्, किनकि यो पछि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यसर्थ ओममन साम्राज्यले प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवातमा जर्मन पक्षलाई छनौट गर्यो। ओटोमन साम्राज्य लामो समयसम्म कमजोर हुँदै गएको थियो, तर प्रथम विश्वयुद्धको दौडान यो मित्रताको विरुद्ध दृढतापूर्वक रक्षा गर्न सक्षम थियो। यद्यपि तिनीहरूले युद्ध जित्नको लागि व्यवस्थापन गरेनन् र यसैले पुरातन साम्राज्य युद्ध पछि अलग भयो। साम्राज्य 1299 थियो म स्थापित उस्मान द्वारा र 29 अक्टोबर 1923 मा विघटित, तर वास्तवमा तुर्क साम्राज्य को अन्त पहिले नै (एउटा चलचित्र अझै पनि पछि देख्ने) सबै 1917 मा Balfour घोषणापत्र सिर्जना गर्न कटिबद्ध थियो अठारहौं शताब्दीमा, तुर्क साम्राज्यको शक्ति बिस्तारै बिग्रियो, पछि पहिलो विश्वयुद्ध शक्तिशाली साम्राज्यको लागि मृत्यु भयो। केही समयको लागि रूस र तुर्क साम्राज्यको बीचको सम्बन्ध घटेको थियो; ओटोमन साम्राज्यको अस्तित्वमा ग्यारह ओर्थामो-रूसी युद्धहरू भन्दा कम थिए। तनावको एक पुरानो क्षेत्र।
पहिलो विश्वयुद्ध 28 जून 1914 को अस्ट्रियाको Archduke फ्रान्स फर्डिनल्याण्ड मा हत्या भएको थियो, अस्ट्रिया-हंगेरीको सिंहासनमा उत्तराधिकारी। 1915 मा, एक जर्मन सिक्योरिटी सेवा संग एक अलेक्जेंडर पेरस रूस मा रोमनी ब्लास्किविक कप्तान को लागि योजना बना रहेको छ (हेर्नुहोस यहाँ)। पेरिसले यसका लागि जर्मन वित्त मंत्रालयबाट7मिलियन जर्मन अंक प्राप्त गर्यो। त्यसोभए तपाईंले कल्पना गर्नु पर्छ कि एक लाखको मूल्य अब कम्तीमा एक हजार गुना यो के लायक थियो। पेरुस ज्युरिखमा 1915 मा व्लादिमीर लेनिनसँग उनीहरूको योजनाहरु छलफल गर्न। अलेक्जेंडर पार्भस स्पष्ट रूपमा एक अनुहार थियो, किनभने उनले 1904 मा भविष्यवाणी गरे कि औद्योगिक देशहरु बीच विश्व युद्ध हुनेछ।
हत्यारा गावेलो प्रिसिपिप र नेडोलो काबिनोभिकको मुकदमामा, यसले देखाएको छ कि फ्रांसीसी मस्जिद ग्रैंड ओरिन्टको हत्याका पछाडि थिए। तथापि, सर्बहरू दोषी थिए र सर्बियाको बीचमा ठूलो मात्रामा हत्या गरियो यहाँ)। यो विश्व युद्धको उत्थानको सुरुवात हो, किनभने रूसी जाजरले सर्बिया अस्ट्रो-हङ्गेरियाको दबाबमा झुन्डाउन चाहँदैनन्। सर्बियाले रूस, फ्रान्स र इङ्गल्याण्डले सबै सैन्य सहयोगको प्रतिज्ञा गरेको थियो भने यसले अस्ट्रियाका मागहरूमा नदिईएको थियो। फ्रांसीसी फ्रीमेन्सन्रीले यस प्रकारको एक चेतना विवादमा निर्देशन दिए जुन विश्वयुद्धमा परिणत भएको थियो। तिनीहरू जान्दथे, निस्सन्देह, कि रूसले सर्बियाली मानिसहरूलाई अनुमति दिँदैन, जसको साथ उनीहरूको बलियो ऐतिहासिक बन्धन थियो, फट। अस्ट्रियाले जर्मनीलाई युद्धमा चढायो र यसरी दुई ठूला शिविरहरू आइपुगेका थिए, जसको साथ तुर्क साम्राज्य र फिलीस्तीनको क्षेत्रको आरक्षण स्पष्ट उद्देश्यको 1 थिए। यो क्षेत्र ओटामान्सका अरब जनजातिहरूको सहायताले विजयी भएको थियो र सउदलाई हाल सऊदी अरबलाई पराजित गर्न अनुमति दिइएको थियो। यो सबै रोथस्लिल्ड धन संग वित्त पोषित भयो (तपाई अर्को भिडियोमा बल्फर घोषणा देख्दा यो तुरुन्तै बाहिर जान्छ)।
त्यही अवधिमा एक क्युप रूसमा गरेको थियो। दोस्रो बोल्सेविक क्रांति यो 1916 मा अलेक्जेंडर पार्वस द्वारा तयार गरिएको थियो। उनले यकीन गरे कि लेनिन उनको निपटान मा यो कूप को लागि आवश्यक सबै पैसा थियो यहाँ)। जेपी मोर्गनको चिन्ता मुख्यतः यहूदी सियोनिस्टिस्ट थिए। विशेष गरी याकूब र Mortimer Schiff, फेलिक्स वारबर्ग, ओटो एच Kahn, अधिकतम वारबर्ग, जेरोम जे Hanauer, अल्फ्रेड Milner र खरीदार गुग्नेइनिम परिवार लेनिन को Bolshevik पार्टी financed। Schiff परिवार र Rothschild परिवारले 18 शताब्दी पछि फ्रैंकफर्ट मा एक संयुक्त उद्यम स्वामित्व। याकूब एच। शाइफ एक रब्बीय परिवारको सन्तान थिए। उहाँले 1860 मा न्यूयर्कको लागि छोड्नु भयो र रुथस्लिल्ड द्वारा प्रशिक्षित गरिएको थियो। Schiff आफैले लगानी बैंकमा कुन्नी, लोब र कंनलाई खरिद गर्यो रोथस्लिल्डको पैसा संग। पल र फेलिक्स वारबर्ग पनि Kuhn, Loeb र Co. को सह-मालिक बने। यी सबै लगानीकर्ताहरूले सँगै योजनाबद्ध क्युपको लागि आवश्यक पूंजी प्रदान गरे। सार निकोलस II ले2ले सिंहासनको एक्सएमएनएक्सएक्स मार्चबाट लियो।
शब्द शार शब्द सेजर बाट व्युत्पन्न छ, जो सम्राटको लागि खडा छ। रूसी tsars वास्तव मा ईसाई रोमन साम्राज्य को सम्राटहरु, गोदाम बेंजेंटिन (ईस्ट रोमन) विश्वास संग थिए। तर राम्रो। थाहा महत्त्वपूर्ण, तर साम्राज्य को क्षमता गिद्घ क्षेत्रहरूमा पनि पहिलो विश्व युद्ध को समयमा तुर्क साम्राज्य को एक महान शत्रु प्रभावकारी लेनिन र frontman संग Rothschild Zionists द्वारा अधिक लगियो छ। त्यस क्षणबाट, रूस वास्तवमा रुथस्किल्ड क्षेत्र हो जसलाई पनि सियोनवादको मार्गदर्शनमा। त्यो धेरैका लागि एक पुल धेरै टाढा हुन सक्छ, तर म तपाईंलाई अनुसन्धान गर्न चुनौती दिन्छु।
वित्तपोषण र उर्दूको उदय
रेप टिपिप उर्दूको को हो? हामी उनको बारेमा के थाहा छ? उर्दू वास्तवमा एक जर्जिया हो, जो खाजार कुलीनको भाग हुनेछ। को Khazar कुलीन (वा Khazar माफिया) र बिन्यामीन Fulford जस्तै मानिसहरूले एड को रोशनी बीच एक शक्ति संघर्ष बारेमा धेरै कुरा छ, तर त्यहाँ के शक्ति समूह जो थाहा मान्छे को लागि एक सुरक्षा नेट रूपमा अभिप्रेरित disinfo रूपमा आफैलाई हेर्नुहोस्। इशारा दिएर तिनीहरू आफैका बीचमा लडिरहेका छन्, जसमा 1 समूहले नयाँ विश्व व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदछ, मेरो विचारमा तिनीहरूले झूटो आशा सिर्जना गर्छन्। यद्यपि, उर्दू आफ्नो जड़ोंमा ओम्यानोम हो, यस क्षेत्रबाट आउँदै गरेको टर्कीको सीमा भन्दा बाहिर छ। 1994 देखि 1998 Erdogan गर्न इस्तानबुल को मेयर मार्च 14 2003 मा उहाँले टर्की को प्रधानमन्त्री थियो 28e 2014 25 अगस्ट थियो। वास्तवमा, 1 मा देशमा दोस्रो उच्च स्थिति। उनले 2001 मा AKP पार्टी को स्थापना गरे, जसमा उनले 2014 को राष्ट्रपति पद को पछाडि सम्म नेता बने। उनले ती राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ठीक 51% जिते। एक उल्लेखनीय विजय जो लगभग चुनाव धोखाधड़ी को सम्झना छ। ओरेगनको विरुद्ध 2013 र 2014 कडा विरोध प्रदर्शन भइरहेको, जहाँ उनले भारी र 22 हस्तक्षेप गरेका थिए। जो 100 2013 अर्ब संलग्न थियो सरकार एक भ्रष्टाचार घोटाले को पक्राउ (मुख्यधारा मिडिया अनुसार) Erdogan नजिक मित्र गरायो। तथापि, Erdogan, अनुसन्धान को एक "कूपन डीटी" र एक "साजिश" भनिन्छ। उनको सरकारले न्यायपालिका र सुरक्षा बलको विवादास्पद सुधारहरूको जवाफ दिए। युगान्डम इन्टरनेटमा जारी गरेको रेकर्डिङमा भएको आरोपमा टर्की, फेसबुक र यूट्यूबलाई ब्लक गरिएको छ। वास्तविक कथा हामी सबै यस पछि सुने छैन, तर यो मेरो दृश्यले घोटाले सिर्फ एक totalitarian तानाशाही को फराकिलोकालागि बाटो लागि, बाटो बाहिर Erdogan को बस मुश्किल विरोधीहरूले हटाउन निर्माण हुन सक्छ भन्ने छ।
फेथेल गिलेनसँग उर्दूको सम्बन्ध पनि धेरै रोचक छ। यो गिलेनले अमेरिकामा जीवन बिताए र शोधकर्ता हेनरी मेकले ब्रोकेकाइन नामक लेखक / शोधकर्तालाई एक रोचक लेखमा उल्लेख गर्छन्। यो भनिएको छ कि गिलसन एक छ क्रिप्टो जेह सीआईएका लागि काम गर्दैछ। एक क्रिप्टो यहूदी यो हो जुन, उदाहरणको लागि, अर्को राष्ट्रीयता वा धर्म स्वीकार गर्दछ, तर वास्तवमा यहूदावादको पालन गर्दछ। मक भन्छिन् [उद्धरण] सम्पूर्ण "अरब वसन्त" इस्लामिक आंदोलन टर्कीमा एक Mossad-सीआईए राज्य टर्कीमा आधारित छ, क्रिप्टो यहूदीहरू। बर्केक, एक टर्की पेट्रीटियाले इलिनोनेता यहूदी-नियन्त्रण एजेन्सीहरूलाई टर्कीमा आतंकवाद र हत्याको पछाडिको अन्वेषण गर्न नतिजा ल्याउँछ।
यस फोटोमा हामी देख्छौं ग्लेनले पप जॉन पॉल द्वितीयको हात हल्लाए। तिनीहरूले यसलाई फ्रीम्यानन हैंडशेकको माध्यमले गर्छन, जसमा औंला र फोफिंगरको बीचमा औंला राखिएको छ।
यो मक्का को टुक्रा पढ्न को लागि दिलचस्प छ, तर म यो थोडा उद्धृत गर्दछ श्री बर्टकेन [बोली] Fethullah Gülen 1964 पछि सीआईए को लागि काम गरिरहेको छ जब अमेरिकी कूटनीतिक ग्राहम फुलर ले उनको सृजन गरे र उसलाई ड्रग को पैसा को उपयोग गरेर वित्त पोषित गर्यो। मानिन्छ कि हेनरीबाट $ 25 बिल छुट्यो। गेलेन आंदोलनमा एक विशाल समूह बनाइएको छ जसले टर्कीमा गैर सरकारी संगठन, फर्महरू, समाचारपत्रहरू र व्याख्यान छात्रावासहरू र साथै संसारभरि स्कूलहरू समावेश गर्दछ। "
गेलेन कोसिस गर्ने प्रयास गर्ने थुप्रै पत्रकारहरूले आफैलाई अभियोग गरेका छन् या जेलमा भेटिए। उहाँसँग संसारभरि सयौं स्कूलहरू छन्। यी विद्यालयहरू सीआईए औषधिद्वारा वित्त पोषित छन्। र यी विद्यालयहरूले सीआईए र मोससएड कार्यालयहरू जस्ता काम गर्छन्। यदि उहाँले केही वर्षहरूमा हुनुहुन्न भने, यहूदीहरूले उनलाई मुस्लिम संसारको खलीफाको रूपमा सम्झनेछन्। खलीफ के हो? मुस्लिम संसारको मास्टर आध्यात्मिक नेता। अज्ञात नेता। बच्चा या यहूदीवादी मुस्लिम पोप।
मिस्रका अरब वसन्त, मोरक्को, अल्जेरिया, सीरिया, ट्युनिस, लिबिया, यमन र टर्कीमा, "न्याय र विकास पक्षहरू" स्थापित गरियो। मध्य पूर्वमा, यी पक्षहरू इल्लुमिनती यहूदी यहूदीहरू मुस्लिम ब्रदरहुडद्वारा समर्थित थिए।
बोर्सेटिनले पनि बताउँछ कि ग्युलियन उर्दूको AKP पार्टीको स्थापना पछि छ र धेरै झूटा झण्डा आक्रमणका लागि जिम्मेवार छ। दस्तावेज राम्रो पढ्न लायक छ र तुरुन्तै स्पष्ट पार्छ कि उर्दू र गिलनको बीचको कथित लडाई शायद जनताको आँखामा बालुवाको स्वर सार्नको लागि हो। निस्सन्देह, गुगल तयार छ र मान्छे उर्दू / गिलेन सम्बन्धको यो अनमास्क पढ्न सक्षम छन्। केहि हुनु पर्छ।
न्युन सदस्य टर्कीले रूससँग सौन्दर्य बन्द गर्दछन् र मिडियाले कब्रको रूपमा चुप लागे
टर्की सिरियामा हस्तक्षेपको लागि तयार छ
सिरियाको टर्की आक्रमण
टर्की: सिरियामा युद्ध, रूससँग पुनरुत्थान बांड र नटोसँग बिग्रिएको सम्बन्ध
Turkstream ग्याँस पाइप युरोपमा टर्की भन्दा अधिक शक्ति दिन्छ
ट्याग: Erdogan, विशेष, कवि, रूस, सीरिया, टर्की, सुरक्षा सेवा, विश्व युद्ध
अरेन्डे जेवेट लेखे:
10 मई 2016 मा 12: 23
इतिहास को एक ठूलो भाग हामी जान्दछन् कि तीव्र मानव मानव जाति, वा मानव खेती को लागि प्रविधी को सिद्ध को रूप मा देख्न सकिन्छ।
« उदारीकरण दिवस मनाउने? के तपाईं जान्नुहुन्छ के तपाइँ जान्नुहुन्छ?
इब्रु उमर उर्दू नारायणगढमा देखिन थाले »
कुल भ्रमण: 13.919.233